OZI NKWUKWU IRVINE - Ibe ụlọ
Okwu ntụgharị asụsụ
Okwu ọrụ mgbasa ozi
OZI NKWUKWU IRVINE
IRVINE NDỤMỌDỤ NKE Asụsụ niile
Kemgbe 1985, Ọrụ Asụsụ America (AML-Global) na-enye ọrụ ndegharị gburugburu ụwa maka ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ihe karịrị asụsụ 150. Irvine bụ otu n'ime ụwa ebe a na-eji ọrụ ntụgharị anyị eme ihe. Ndị ntụgharị Irvine anyị bụ ndị kacha mma na ndị nwere ahụmahụ na-arụ ọrụ na obodo nke bụ ebe obibi nke ndị si na 140 mba. Ọrụ ntụgharị nwere ike ịbụ n'ọtụtụ usoro gụnyere: obere cassettes, obere cassettes, teepu, VHS & cassettes audio, DVD, na faịlụ dijitalụ gụnyere DAT, CD, MPEJ, MP3 na RA.
Maka ngwa ngwa ngwa na ntanetị n'efu, ma ọ bụ ka edobe iwu, biko pịa ọrụ mmasị n'okpuru
na ebumnuche gị mezuru. Anyị ga-eso gị rụọ ọrụ n'ime oge ịchọrọ iji nweta ihe ịga nke ọma ịchọrọ.
A na-arịọkarị nsụgharị na Irvine Spanish gaa na Bekee na Bekee gaa na Spanish n'ihi ọtụtụ ndị na-ekwu okwu na mpaghara Irvine. Agbanyeghị ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ na-abawanye ụba na-eji asụsụ dị iche iche na-azụ ahịa karịa Bekee na Spanish. Asụsụ ndị a na-asụkarị maka ndegharị bụ: Portuguese, French, German, Russian, Chinese, Korean, na Japanese, n'etiti ọtụtụ. Irvine bụ ebe obibi nke ọtụtụ asụsụ yana Ọrụ Asụsụ America nwere ike inyere gị aka ịgwa ha niile okwu.
Ọnụahịa ọrụ ntụgharị
Ọ nweghị ọrụ idegharị akwụkwọ bụ otu, yabụ a na -akwụ ụgwọ ọrụ idegharị aha n'otu n'otu dabere n'ọtụtụ ihe. A na-ekpebi ọnụahịa site na: nchikota asụsụ, oge ngwụcha, ọnụọgụ ndị na-ekwu okwu na ogo ọdịyo. Ọzọkwa, ihe ndị ọzọ na-agụnye, ụdị dị iche iche nke na-ajụ bụ na njedebe onye ọrụ formats chọrọ.
Teknụzụ Nsụgharị Ọhụrụ na -azọpụta oge na ego
Iji mee ka nhota okwu dị ngwa, AML-Global na-eji teknụzụ nka nka iji nwee ike ịnyefe faịlụ n'ime ụdị dijitalụ kacha mma dị ka anyị nwee ike ịzaghachi n'ụzọ dị ngwa ngwa. Anyị nwekwara saịtị Nyefee Protocol (FTP) dị maka faịlụ eletrọnịkị buru ibu nke ukwuu maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ọkọlọtọ sistemụ email. Ndị na-edegharị asụsụ ọtụtụ asụsụ Irvine zụrụ nke ukwuu yana teknụzụ anyị dị elu na-enye anyị ohere ịzaghachi ngwa ngwa na arịrịọ gị ma na-abawanye oge ntụgharị.
Anyị nwere ike ijikwa arịrịọ ntụgharị gị
Anyị nwere nnukwu akụrụngwa nke ndị na-edegharị akwụkwọ Irvine nwere ahụmahụ bụ́ ndị na-ede ihe karịrị asụsụ 150. Ka anyị ọkachamara na enyi na enyi na-arụ ọrụ nyere gị aka ngwa ngwa na-eri n'ụzọ dị irè mezuo gị arịrịọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ntinye okwu ma ọ bụ nye iwu taa.
Ọrụ ntụgharị asụsụ Irvine
Ọrụ ntụgharị okwu Irvine
Kpọtụrụ anyị ma ọ bụ kpọọ anyị oku iji chọpụta otú anyị nwere ike isi nyere anyị aka.
Anyị Ụlọọrụ Ụlọọrụ
Okwu: 1849 Sawtelle Blvd. Ụlọ Suite 600 Los Angeles, CA 90025
ekwentị: (310) 829-0741
email: Ntụgharị @Alsglobal.Net